Football Khabar » म्यानचेस्टर सिटीको टार्गेटमा रियल मड्रिडका इस्को !
म्यानचेस्टर सिटीको टार्गेटमा रियल मड्रिडका इस्को !
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले स्पेनिस रियल मड्रिडका प्ले मेकर इस्को भित्र्याउन कसरत थालेको छ । उसले स्पेनिस खेलाडीलाई यसै समरमा अनुबन्ध गर्न चाहेको हो ।
सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाको योजनामा सिटीले रियलका स्टार मिडफिल्डरलाई भित्र्याउन खोजिरहेको छ । इस्कोलाई रियलले बेच्ने खेलाडीको सूचीमा राखेको छ ।
सिटीले युवा मिडफिल्डर इस्कोका लागि ८० मिलियन युरोसम्म खर्चिने तयारी गरेको छ । हालै मात्र सिटीका स्पेनिस खेलाडी डेभिड सिल्भाले अर्को सिजनपछि क्लब छाड्ने घोषणा गरेकाले सिटीले इस्कोलाई सिल्भाको उत्तराधिकारी बनाउने उद्देश्यले अनुबन्ध गर्न चाहेको हो ।
रियलमा आगामी सिजन प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको नेतृत्वमा इस्कोले सुरुआती टोलीमा मौका पाउने सम्भावना कम मात्रै छ । यो अवस्था बुझेका ग्वार्डिओलाले मिडफिल्डमा निकै प्रभावशाली मानिने इस्कोमाथि नजर लगाएका हुन् ।
यता, इटालियन क्लब युभेन्टसले पनि इस्को अनुबन्ध गर्न प्रयास गरिरहेको छ । युभेन्टस नयाँ सिजनका लागि आफ्नो फितलो मिडफिल्ड इस्को भित्र्याएर सुधार गर्ने दाउमा छ ।
प्रकाशित मिति १२ असार २०७६, बिहीबार १२:३०